Chii chaunogona kuita nekurasikirwa kwemusika wemusika? | Ehupfumi Zvemari
Chii chaungaite nezve kurasikirwa kwemusika wemasheya?
Vatengesi vadiki nepakati vari muchinzvimbo chekushandisa mamwe marongero ekumisa kudzikiswa kwemari yemusika kusvika panguva iyoyo, ndokuti kurasikirwa kwemari. Kazhinji semhedzisiro yekushanda kwe kutenga nekutengesa zvikamu pamusika wekutengesa. Asiwo zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirirwa kudyara (mari yekudyara, mvumo, yakanyorwa, nezvimwewo). Asi chinonyanya kufadza nezve aya marongero ndechekuti ivo vanogona kunyange kushanda kuti vakubatsire iwe fiscally mune inotevera mari chirevo. Ndokunge, inogona kuve nemhedzisiro yakanaka yausingakwanise kuona mukukosha kwayo izvozvi.
Kubva pane ino mamiriro ese, zvichave zvakakosha kuti iwe uedze kutsvaga imwe mhando yemhinduro kune iyo matambudziko emusika wemari izvo zviwanikwa zvako zvakagadzirwa. Kunyanya mu zvimwe zviitiko zvekupenga yemisika yemari uye uko pazvinogoneka kwazvo kuti iwe unogona kurasikirwa ne20% kana 30% yemari yakadyarwa. Kana kunyangwe zvakadaro mune zvakanyanya kushata mamiriro uko kuwira mumisika yemaketi kune mhirizhonga zvakanyanya. Kusvika padanho rekuti pachasvika poindi apo paunouya kuti uzvibvunze wega mubvunzo unotevera: pane here chaizvo nzira dzekugadzirisa nehurema?
Ehe, hapana mapipi emashiripiti ekugadzirisa iyi dambudziko rakakomba iwe raunogona kukudziridza pane imwe nguva muhupenyu hwako semudiki uye wepakati investor. Nekudaro, kuburikidza nedzimwe nhungamiro kana kuraira iwe unokwanisa kutarisana nekudonha kuri kuitiswa nenyika nehunyanzvi hwepasi rose pane imwe nguva. Saka kuti nenzira iyi, kune rimwe ruoko iwe unogona rega kurasikirwa nemari kuti uri kutambura. Uye kune imwe, iwe uri muchimiro chiri nani chekusimudzira mashandiro mumisika yemari.
1 Kuremara: chinhu chekufunga
2 Nhungamiro yekumisa kurasikirwa
3 Kusarura kana kutengesa zvachose?
4 Nguva dzose chengeta zvigaro
5 Tora mukana wemitengo yakachipa
Kuremara: chinhu chekufunga
Muzviitiko zvese, hauzove nesarudzo kunze kwekutarisa chimiro chauinacho sevashandisi vemusika wemasheya. Kunge hunhu hukuru hwekudyara kwawakaita mune imwe yenguva. Uye ndeapi anotevera atinokufumura pazasi:
Chikamu chemvura: Izvo zvinodikanwa kusiyanisa pakati pevashandisi vanoda zviwanikwa zvemari kubva kune avo vasingadaro. Mupfungwa iyi, haufanire kukanganwa kuti vekutanga vavo vachazoda kutengesa zvikamu zvavo kuti vagadzirise dambudziko. Ipo ivo varimi vakasara vachange vaine nguva yakawanda yekudzosera mari yavo. Mune mamwe mazwi, iwo masheya anogona kufungidzira mutengo waakatenga.
Nguva yekugara: Hapana mubvunzo kuti kuva munguva yakareba hakuna kufanana nekupfupika. Kusvika padanho rekuti zvichienderana neiyi paramende yakakosha iwe unosarudza imwe kana imwe nzira yekumisa kurasikirwa kwauinako muaccount account yako. Iwe hauzove neimwe mhinduro kunze kwekuziva iyo nguva yeiyo equities mashandiro.
Mari yakachengetwa: Zvichava zvinobatsira kwazvo kutora mhinduro kudambudziko iri iwe raunofunga nezve huwandu hweaya mashandiro mumusika wemasheya. Nekuti zvirizvo, kurapwa kweinvestment ye3.000 euros haina kufanana neiyo inoda imwe 100.000 euros. Pachave paine kuve nekusiyana kwakasiyana mumhinduro dzaunofanira kutora kubva zvino zvichienda mberi. Hazvishamisi kuti kurapwa kwako kunenge kwakasiyana zvakanyanya mune imwe neimwe kesi.
Nhungamiro yekumisa kurasikirwa
Zvino inouya nguva inonakidza kwazvo yechinyorwa chino uye ndiyo iyo inoreva mhinduro dzaunenge uinadzo kugadzirisa zviitiko zvinonetsa izvi munyika yemusika wemasheya. Zvakanaka, usazvidya moyo nekuti kubva zvino zvichienda mberi dzimwe nzira dzinoverengeka kuti ive nekubuda ropa kwekudonha mumatunhu. Iwe unoda kuziva here kuti ndeapi ane akakosha zvakanyanya? Zvakanaka, nyatsoteerera nekuti unogona kubatsira zvakanyanya kuti ugone kubuda mune imwe mamiriro asina kunaka emabhegi.
Kubhadhara mutero kwevakaremara: zvichienderana nemari yakawanikwa mukati megore rino uye zvichienderana nekurasikirwa pamusika wemasheya iwe waunotambura, unogona kutengesa zvishoma kana zvakakwana zvechengetedzo dzisingakosheswi zvine chekuita nemutengo wekutenga wesitatimendi yemari inotevera. Iyo nyaya yekuita nhamba, kuverenga kuti ndeapi mabhenefiti anogona kutaurwa nekuita izvi kutengesa uye, kana paine kusahadzika, chinhu chinonzwisisika kuenda kumudzidzisi wezvemitero uyo achange achitarisira kusarudza kana kwete kuita uku zvaitwa. Parizvino ndeimwe yesarudzo inobatsira kwazvo pane zvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
Kusarura kana kutengesa zvachose?
Iko kuvhiya kunoenderana nezvimwe zvezvinhu zvakurukurwa muchitsauko chakapfuura. Nekuti haizogara iri mamiriro akafanana uye kunyangwe izvo zvaunogona kugadzira pakutanga. Kana zvisiri, pane kudaro, kuita uku mumisika yezvemari kunoenderana zvakanyanya ne capital capital uye kunyanya nguva yekugara zvachose iyo mari yakatemerwa. Sezvo iwe unenge wave wakasimbisa, hazvizove zvakafanana kurapwa muzviitiko zvese, asi danho rakasiyana rinodikanwa mune yega kesi. Nekuti haugone kukanganwa kuti imwe neimwe yadzo haina chekuita nezvimwe.
Kubva pane iyi nzira yakajairika, inouya nguva yekupedzisira yezvose. Mauri uchafanirwa kutaura zvaunofanirwa kuita kubva ikozvino. Ndokunge, kungaita yekutengesa yakazara kana yakasarudzika kuitira kuti usarasikirwe nemari yakawanda munzvimbo dzako mumusika wemasheya. Zvakanaka, mune ino pfungwa, hapana chinhu chiri nani pane kuita maererano ne masheya aunayo mune yako portfolio panguva idzodzo. Asi nguva dzose uchifunga nezve chinhu chakakosha senge kuti uchazoda mari iyoyo mumwedzi iri kuuya. Kana kana pane zvinopesana iwe unogona kuzvibvumira iwe kuti uenderere mberi neakavhurika mafambiro kwemwedzi yakati kana kunyange gore.
Nguva dzose chengeta zvigaro
Imwe nzira iyo iwe yaunogona kutora mukana mune ino inogona kuitika haisi yekusiyanisa yako nzira yekudyara mune zvishoma. Izvi mukuita zvinoshandura kusaita zvachose chinhu mumabasa emusika wemasheya. Nechinangwa chekutanga chekumirira iyo misika inotangazve kugadzikana uye uve nechokwadi chekuti mitengo yesechengetedzo yega yega inosvika, zvirinani, mutengo wekutenga mukati menguva yenguva iyo hupfumi hwako hwemumba hunogona kufungidzira. Icho chisarudzo chechokwadi chinochengeterwa icho chinoratidzirwa kune avo varairidzi vane chimiro chekudzivirira vasina matambudziko emari uye vanotungamira kudyara kwavo mukati nepakati kana kwenguva refu.
Havasi vese vashandisi vanogona kukwanisa kuenda kune ino yakaoma mhinduro. Asi zvese zvinoenderana nekuti iwe uchazoda kugadziriswa kusangana nemari yemunhu kana yemhuri kwemwedzi mishoma inotevera kana makore. Kune izvi uchafanirwa kuongorora kuti kwaunowana mari kubva ikozvino uye izvo zvinozotema danho rauchatora nezve dambudziko iri rinomuka uye iro rinogona kutogadzira mamwe marwadzo emusoro husiku. Hazvishamise kuti iwe urikutamba wakawanda nesarudzo iyi yaunayo pamberi pako izvozvi.
Tora mukana wemitengo yakachipa
Chero zvazvingaitika, kana iwe uri weanonyanya kuita hasha, iwe une zano rinogona kubatsira zvakanyanya pamberi peakanyanya kureba mazwi kune ese. Hazvishamisi kuti zvinogona kufunga kuti iwe unotora mukana wemitengo yakaderera yemitengo yekuvandudza nzvimbo dzako mumatunhu. Nekuti zvirizvo, zviri nyore sezvo uchizokwanisa kuona pazasi. Iri izano rakavakirwa pakuita kusarudza kutenga kuitira kuti uwanezve zvipo zvako zvemari. Asi pasi pemutengo wakakwirira kupfuura izvo zvavanazvo panguva ino. Zvekuti nenzira iyi, haugone chete kubva kuremara, asi zvakare kuti chimwe chikamu chinoenderana hwaro hwechazove chibereko chekudyara mari yako.
Iri zano rekudyara rinoshanda kwazvo kana iko kuderera kuri mugumisiro wekudonha kwakanyanya kubata. Kusvika pakuti iwe uchasangana nevamwe stock mitengo iyo ichave inonakidza kwazvo sekuvazvidza. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve neropa rinotonhora yakawanda uye pamusoro pezvose zvaunotsigirwa neaccount account ine simba rakaringana kugutsa chishuwo chakakosha chauinacho semudyari mudiki nepakati. Iwe unofanirwa kukoshesa pamusoro pezvimwe zvinoonekwa zvekuti hunhu hwako hunogona kukwira pamusoro pe15% mune pfupi nzvimbo yenguva.
Chero zvazvingaitika, unofanirwa kuziva kuti zano iri rinonyatso shanda kana zvasvika pakuchengetedza kunozivikanwa nekusagadzikana kwavo uye simba ravanopa mukuita kwavo kwemusika wemasheya. Iko mafambiro asina mhirizhonga zvakanyanya uye anogona kudzoreredza mutengo wavo wepakutanga zviri nyore, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti kudonha kwavo mumisika yemari kune mhirizhonga sekune zvimwe zvikumbiro pamusika wemasheya. Beyond mamwe masystem aunogona kushandisa kubata nekurasikirwa kunogona kuiswa mune yako mari chirevo. Ndokunge, shure kwezvose, izvo zvainoita nezviitiko izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chaungaite nezve kurasikirwa kwemusika wemasheya?
Muchato unodhura zvakadii?
Chii chinonzi chimiro fudzi repfudzi?